Bhizinesi rinopa simba zuva rechipiri reIMEX America
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » misangano » Bhizinesi rinopa simba zuva rechipiri reIMEX America
Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Musangano Weindasitiri Nhau • misangano • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau
Bhizinesi riri Kukura paIMEX America
Mabhenefiti maviri anogombedzera bhizinesi achisimbisa yazvino edition yeIMEX America, iri kuitika muLas Vegas.
Iyo show floor yanga iri gadziriro yemikana inonakidza yebhizinesi.
Kudzidza pashoo kwakatangwa neinotsinhiro ine simba yakakurudzira vateereri kuve 'vakakanganisa'.
Iyo show's yakazara chirongwa chedzidzo (200 + zvikamu) zvakare idhirowa hombe.
"Kuva pano kunondipa mukana wekuve pamusoro pemutambo wangu uye kukwanisa kubatsira vatengi vangu zvirinani." Mutengi anogarirwa Linda Lawson, anobva kuAchieve Incentives & Meetings muOhio, anopfupikisa mabhenefiti maviri anogombedzera ebhizinesi achisimbisa iyo yazvino edition ye. IMEX America, iri kuitika muLas Vegas.
Iyo show floor yanga iri yekumisikidza inonakidza mikana yebhizinesi saAndrew Swanston, Musoro Wekutengesa, Misangano & Zviitiko pa. ExCel London, anotsanangura kuti: “Takava nezuva rakanaka nezuro. Mutengi watave tichivaka hukama naye kweanopfuura makore gumi akasarudza IMEX America senzvimbo yekusimbisa chiitiko chevamiriri zviuru zvitanhatu kumubatanidzwa wezvekurapa wepasi rose muna 6,000 - showo yaive mukana wakanaka wekusangana chiso nechiso nekusaina chibvumirano. "
Mutengi anogashirwa Thomas Holland, anobva kuAtlantic Coast Life Inishuwarenzi muSouth Carolina, anowedzera kuti: “Ndiri kuronga mapoka ekukurudzira vanhu kwemakore mashoma anotevera kuenda kunzvimbo dziri muEurope neDubai uye ndiri kutarisira kusaina chibvumirano panguva yangu pano yerwendo rwekurwizi. muEurope.”
Chirongwa chakazara chedzidzo cheshoo (200 + zvikamu) zvakare dhirowa hombe semutengi anogarwa Frank Gainer, anobva kuAmerican Occupational Therapy Assocation, anotsanangura kuti: “Dzidzo ishuviro yangu uye ndinobata mikana yekudzidza pazviitiko zvangu. Parizvino tiri kufungidzira mafambisirwo atinoita dzidzo pazviitiko zvedu, izvo zvinotangira pazviitiko zvidiki kusvika kumisangano mikuru yepagore, uye ndakafemerwa nechimiro chechirongwa cheInspiration Hub.”
Kubva pa'kukanganisa' kuenda kuchinjika
Kudzidza pashoo kwakatangwa neinotsinhiro ine simba yakakurudzira vateereri kuve 'vakakanganisa'. Muhutungamiriri hweDhijitari: Tsika shanu dzekubudirira nerufaro munyika inogara ichichinja-chinja munyori uye mutauri anokurudzira Erik Qualman akataura nezve kuchinjika kwave rimwe re 'masimba matsva', kunyanya mumakore akati wandei apfuura. kwaunoenda, asi uchichinjika munzira yako”, vakapa zano. Mukuru wedhijitari akataurawo nezve maitiro ekuita 'data, kukanganisa uye kukanganisa' kuronga zano redhijitari rechiitiko chinopa kubatanidzwa kwechokwadi: "Tanga nekunyemwerera. Funga nezve zvichaunza kunyemwerera kune mutengi wako uye gadzirisa nzira yako kudzoka kubva ipapo. "
Kutyaira chiitiko chekuita nekubvisa huwandu hwevanhu kwakakurukurwa muna Ngatipedzei rusarura rwevanhu, musangano wakaitwa naDavid Allison, muvambi weValuegraphics, yekutanga dhatabheti repasi rose rakagadzirwa zvakananga kubatsira masangano kufanotaura uye kukanganisa maitiro vachishandisa hunhu hwatinogovana. "Demographics inotsanangura izvo vanhu vari, asi kwete maitiro ekuita navo," anodaro. Munzvimbo dzose dzepasi tsika dzepamusoro dzinonyanya kukoshesa vanhu Mhuri, Kuva, Hukama, Ushamwari uye Nharaunda - David akagovera nzira yekupinza mune izvi zvakakosha kuti ataure mashoko anokosha.
Yakaitirwa paInspiration Hub, kumusha kune show floor dzidzo, Hunhu hwemunhu - maonero matatu akaona nyanzvi kubva kuDear World, Human Biography uye TLC Shumba dzichitungamira hurukuro yeboka pamusoro pekuongorora hunhu hwevanhu uye simba rekuita ngano kufadza nekuita. “Kutaura ngano hakuiti kuti tive nehunyanzvi, kunoita kuti tive vanhu. Kana tikakwanisa kukumbira tsitsi sehunyanzvi hwakakosha, ndipo patinowedzera kugadzira nzvimbo inosanganisirwa yekushanda, ”Gian Power anobva kuTLC Lions anotsanangura.
Iyo Relaxation Reef yakapa nzvimbo ine runyararo kubva pauriri hweshow kuti uzorore uye udzoke zvakare pakati pemisangano nezvikamu zvedzidzo. Holly Duckworth anobva kuLeadership Solutions International ari kutungamira chirongwa chekufunga uye kufungisisa zvikamu.
IMEX America parizvino iri kuitika kuMandalay Bay kusvika Mbudzi 11.